Maxaa dhici kara haddii uu baarlamaanku diido heshiika doorashada? – Kalfadhi
Maxaa dhici kara haddii uu baarlamaanku diido heshiika doorashada?
September 19, 2020 Hassan Istiila
Saddex sababood oo uusan shirkii Dhuusamareeb maanta u qabsoomi karin
Madaxweyne Farmaajo oo farriin u diray madaxdii ka maqneyd shirkii Dhuusamareeb
Maxay Jubbaland iyo Puntland ka yiraahdeen heshiiskii doorashada ee Dhuusamareeb?
“Waxaan mar kale idiin caddaynaayaa bacdamaa aad tihiin codka shacabka oo aad matashaan ummadda Soomaaliyeed ayna tahay inaan baranno golahanni wuxuu wakiil u yahay dawlad goboleedyada wuxuu wakiil u ahay shacabka Soomaaliyeed go’aankaa gaartaanna waaa in dalka oo dhan laga aqbalo, waa sida caalamku ku shaqeeyo waxaan idiin cadaynayaa in aan halkan ku soo celin doono heshiis walba oo aan la gaarno madaxda dawlad goboleedyada si aad kaalintiina dastuuriga ah uga qaadataan haduu Ilaahay yiraahdo.”ayuu yiri madaxwayne Farmaajo. BBC Soomaaliya ayaa warbixintaan horay loogu daabacay.
Muxuu xad-gudub Galmo u fasirayaa sharciga dambiyada la xiriira Galmada?